लकडाउन थपिएसंगै सित्तैमा कण्डम डेलिभरी, यसरी गर्नुहोस अडर ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > रोचक > लकडाउन थपिएसंगै सित्तैमा कण्डम डेलिभरी, यसरी गर्नुहोस अडर !
लकडाउन थपिएसंगै सित्तैमा कण्डम डेलिभरी, यसरी गर्नुहोस अडर !
एजेन्सी । अमेरिकाको मिचिगन राज्यले लकडाउनमा परेका जोडीलाई सित्तैमा कण्डम डेलिभरी गर्ने योजना ल्याएकोसमाचारमा जनाइएको छ ।
कोरोना महामारीका दौरान आफ्नो राज्यका नागरिकलाई गर्भ रोकथाममा सहयोग गर्न र सरुवा यौनरोगबाट बचाउन स्वास्थ विभागले यस्तो योजना ल्याएको हो ।
‘यो स्वास्थ संकटका बेला हाम्रो समुदायलाई नचाहेको गर्भ रहन, सरुवा यौन रोग र एचआइभीबाट जोगाउनका लागि निरन्तर सहयोग गर्नुलाई हामीले अति महत्वका साथ लिएका छौं,’ मिचिगन स्वास्थ विभाग तथा मानव सेवाकी प्रवक्ता लायन सुत्फिनले एमलाईभ डटकमसँग भनेकी छिन् ।
सुत्फिनका अनुसार मिचिगनवासीहरुले इमेल ठेगाना मार्फत कण्डमको अर्डर गर्नसक्छन् । कण्डमका प्याकेजहरु अलग–अलग राखिएको हुन्छ र यो सुरक्षित हुन्छ । सुफिनका अनुसार प्रत्येक प्याकेजमा १० वटा कण्डम र लुब्रिकेशनको १० प्याकेट हुन्छ ।
इमेलमार्फत अनुरोध गरेपछि सम्बन्धि व्यक्तिको हातमै प्याकेज पुर्याइन्छ । स्वास्थ्य विभागले यसअघि विभिन्न स्वास्थ संस्थामार्फत निशुल्क कण्डम उपलब्ध गराउने गरेको थियो । तर लकडाउनका कारण घरबाहिर स्थानीयहरु निस्कन नपाएको अवस्थामा यस्तो योजना ल्याइएको हो ।
मिचिगनमा भर्खरै मात्र घरमै बस्न दिइएको निर्देशनको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो । हतियारसहितका प्रदर्शनकारीले गत बिहीबार मिचिगन स्टेट हाउसअगाडि लकडाउन खोल्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
कोरोना महामारीबाट अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक बनेको छ । त्यहाँ हालसम्म १२ लाख ६३ हजार ९२ जना संक्रमित भेटिएकामा ७४ हजार ७९९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
२०७७ वैशाख २५ गते ०८:२३ मा प्रकाशित
कोरोना महामारी : विश्वमा ३८ लाख २१ हजार बढीमा संक्रमण,१२ लाख ९९ हजार निको
नेपाल बैंकले एक करोड ५४ लाख ३१ हजार ८४० कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने
शेयर बजार अपडेट : पहिलो घण्टामा ३.९१ अंकले घट्यो नेप्से, दुई बैंकको सर्वाधिक कारोबार
जागिर लगाइदिने भन्दै बलात्कारको प्रयास
देशभर भर्ना अभियान सुरु